Uyisebenzisa kanjani iMacBook okanye iMacBook Pro kwimowudi yescreen esivaliweyo | Ndisuka mac
Uyisebenzisa kanjani iMacBook okanye iMacBook Pro kwimowudi yescreen esivaliweyo
UJordi Gimenez | | Iikhompyuter zeMac, Tutorials
Lo msebenzi awunakuba yimfuno yabaninzi kuthi, kodwa kukho abasebenzisi abanjengootitshala okanye izinto ezinje ezinokufuna oku ngamanye amaxesha. Imalunga namandla Sebenzisa iMacBook yakho xa kuvaliwe isikrini usebenzisa ikhibhodi yangaphandle kunye ne-trackpad / imouse.
Ngale ndlela sinokusebenzisa iscreen sangaphandle ngeprojektha okanye esweni naluphi na uhlobo, nguewe, umba we-USB C weMacBook 2015 kwaye kamva okanye iMacBook Pro 2016 kwaye kamva isebenzise uhlobo oluthile lweadaptha ukuyiphendula nge-HDMI.
Ngokusengqiqweni xa kufuneka yenza umboniso okanye sifuna ukusebenza ngento esinayo kwi-Mac yethu kunye nescreen esivaliweyo amanye amanyathelo angaphambili kufuneka alandelwe. La manyathelo ngala esiya kuwacacisa namhlanje kwesi sifundo sincinci.
1 Izinto ezifunekayo kwimowudi yescreen esivaliweyo
2 Qhagamshela ikhibhodi kunye nempuku
3 Ungayikhupha njani ngokufanelekileyo iMac yakho ekubekweni esweni
Izinto ezifunekayo kwimowudi yescreen esivaliweyo
Isixhobo samandla se-AC
Ikhibhodi yangaphandle, imouse okanye i-trackpad, ene-USB okanye ngaphandle kwamacingo
I-USB-C kwiadaptha ye-USB ukuba usebenzisa imouse ye-USB okanye ikhibhodi eneMacBook (2015 nasemva koko) okanye iMacBook Pro (ngo-2016 nasemva koko)
Umboniso wangaphandle okanye iprojektha
Ngoku kufuneka sisebenzise imowudi evaliweyo yesikrini kwi-Mac, kwaye oku kufuneka sikwenze kwimeko apho ingaziwa ngokuzenzekelayo xa sele uqhagamshelwe, Kukusebenzisa intambo yamungena kwikhompyuter ulele okanye ucimile. Nje ukuba uqale ikhompyuter, iya kuyibona ngokuqinisekileyo iscreen.
Qhagamshela ikhibhodi kunye nempuku
Kule nto kufuneka kucace gca ukuba ukuthintela iingxaki zohlobo oluthile ngonxibelelwano kungcono i-Mac yakho ifakwe kwiplagi yamandla. Nje ukuba iqhagamshelwe kufuneka sinxibelelanise ii-peripherals nge-USB kwaye ngelixa iMac inescreen esivulekileyo kwaye siyasebenza siyaxhuma kwaye yiyo. Nje ukuba i-desktop ye-Mac ivele kwiscreen singavala isiciko.
Ukuba kwimeko yethu sisebenzisa ikhibhodi engenazingcingo kunye nempuku, Into ekufuneka siyenzile kukuqhagamshela kwimida ngaphambi kokusebenzisa iBluetooth
. Ukuba asinayo iBluetooth esebenzayo sinokuyenza isebenze ngokuthe ngqo kwiiNkqubo ezikhethwayo. Nje ukuba sinxibelelene, sidibanisa iliso langaphandle kwaye sivale isiciko.
Ungayikhupha njani ngokufanelekileyo iMac yakho ekubekweni esweni
Emva kokugqiba la manyathelo, akufuneki ube nangxaki yokujonga kunye nokusebenza neMac yakho kwiscreen sangaphandle esixhumeke kwikhompyuter. Ukucima ikhompyuter, kungcono ukubeka iMac kwimo yokulala ngokukhetha kuyo imenyu yeApple> Ukulala. Eminye imiboniso ye-DVI kunye ne-Mini DisplayPort, kubandakanya i-aluminium DVI kunye ne-Apple 24-intshi kunye ne-27-intshi ye-LED Cinema Displays, ayinakukhutshwa ngaphandle kokulala ikhompyuter. Ukuba awuqinisekanga ukuba ngaba isikrini sakho sinokunqanyulwa ngolu hlobo, beka ikhompyuter yakho kwimowudi yokulala ngaphambi kokuyikhupha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyisebenzisa kanjani iMacBook okanye iMacBook Pro kwimowudi yescreen esivaliweyo
Kwaye uza kuthini xa ucima nje ukubek'esweni kwangaphandle ... ??
Ndilayishe isikrini somoya ukusuka ngo-2011 sokuyisebenzisa ngoluhlobo.
Umkhuseli webhodi yezitshixo yeMacBook 12 intshi yaseYurophu